Fatra-paka tahaka: lany andro mitady dikan-teny ny Malagasy - ewa.mg
News - Fatra-paka tahaka: lany andro mitady dikan-teny ny Malagasy
… Satria voizina mafy
any ivelany ny fandikan-teny, roboka ihany koa ny Malagasy. Raisina
ho zava-dehibe ny momba azy io hany ka maro ny petatoko ao anatiny.
Mety hitarika any amin-javatra hafa mihitsy anefa
Efa tsy finiavana hampivelatra ny
teny malagasy irery intsony kosa ny manosika ny mpikaroka sasany fa
fahamaizana ny haka tahaka befahatany ny any ivelany. Lasa
laharam-pahamehana ho an-dry zareo ireo ny hampitovy ny teny
malagasy amin’ny teny vahiny. Anaran-javatra mipoitra avy any
ivelany, hezakezahina fatratra ny handika azy amin’ny teny
malagasy. Hany ka nogasigasina befahatany ny “radio” ka nanjary
“vata fandraisam-peo”, “vata fandefasam-peo”, “fampielezam-peo”,
sns. Teraka avy amin’izany ny “tantara filalao an’onjampeo”,
Rehefa avy manao fandikan-teny
petatoko tahaka izao ireto ampahana mpikaroka ireto dia miteny fa
“azo hnaporofoana fa velona sy miaina ny teny malagasy” io
voambolana na anarana vaovao io. Azo lazaina ho velona sy miaina ve
ny teny malagasy raha rakotra voambolana na anarana, sns, vaovao
kanefa tsy mifanaraka amin’ilay tondroina akory ireny
mitazam-potsiny ny hafa
Mateti-pitranga eo amin’ny
fandikan-teny eto Madagasikara ihany koa ny fipoiran’ny voambolana
vaovao avy any amin’ireo tsy mahafehy akory ilay sehatra. Ny
mahavariana anefa, toa mitazam-potsiny fa tsy mba manao fanitsiana
ireo izay tokony hanao izany. Misy aza moa, vao mainka indray
miventy isak’izay mahatsiahy ireny teny na voambolana petatoko
ireny. Hatramin’izao, mbola heno matetika any amin’ny radio,
ohatra, ny :“Araka ny teny baiko”, “hanatanteraka varavarana
Lany fotoana sady lany rondoha no
lany vola aman-karena amin-javatra hamotika ny teny malagasy ireo
mpikaroka sy ireo miravaka diplaoma sasany. Ny hafa indray, voan’ny
fandraikiraikena ka tsy afaka na tsy sahy manitsy akory ireo
voambolana na teny vaovao sadasada. Ahoana ny mety hiafaran’ity
teny malagasy ity?
… Ireo mpikaroka vahiny no nilaza
fa “porofo hanamarinana fa velona sy miaina ny teny iray ny
fananany teny (voambolana, anarana…) vaovao”… Raha tsy mitandrina,
mety hitarika any amin’ny fahapotehan’ny teny malagasy tanteraka ny
tranga tahaka ireo satria hanamaivana ny lanja aman-kasin’ny teny
malagasy. Tsy zava-baovao io fa paikady napetraky ny vahiny hatry
L’article Fatra-paka tahaka: lany andro mitady dikan-teny ny Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Mahajanga: manodidina ny 23 000 ireo hisitraka ny Tosika fameno
Nandritra ny fitsidihan’ny solontenan’ny Pam ny governoran’ny faritra Boeny, omaly, no nahafantarana fa manodidina ny 23 000 ireo fianakaviana sahirana hisitraka ny Tosika fameno ao Mahajanga. Entina hiatrehana ny krizy sosialy ateraky ny valanaretina Covid-19 izany.Ireo olona misoratra mazava amin’ny fokontany sy manana kara-panondrom-pirenena ihany ny hahazo izany Tosika fameno izany. Tanjona ny fampanarahan-dalàna ny olona sy ny hanairana ny sainy hiditra amin’ny ara-dalàna amin’ny maha olom-pirenena feno.Hisy ny fanadihadiana ahafantarana marina ireo olona tena latsaka an-katerena toy ireo very asa tsy fidiny vokatry ny krizy fahasalamana. Hirotsaka an-tsehatra ireo mpianatry ny oniversite miisa 250 hitety ny fokontany 26 ao Mahajanga. Hiainga amin’ny antontanisa nataon’ny mpiasam-panjakana farany teo izy ireo ary hitety mihitsy trano hijery ireo tena marefo. Ankoatra ny Tosika fameno avy amin’ny Pam, nampanantena ny fanjakana fa ho avy tsy ho ela koa ny Vatsy tsinjo ho an’i Mahajanga.Tatiana AL’article Mahajanga: manodidina ny 23 000 ireo hisitraka ny Tosika fameno a été récupéré chez Newsmada.
Fizahantany anatiny: dia an-tongotra 182 km
Afa-tsy ny any Nosy Be, tsy misy ny mpizahatany vahiny tonga aty Madagasikara, satria tsy misokatra ny sidina ana habakabaka avy any ivelany mankaty Madagasikara. Manoloana izany, nametraka paikady vaovao sady miavaka ny fanjakana, hampiroboroboana ny fizahantany ato anatiny. Iarahan’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro (MTTM), sy ny Ofisim-paritry ny fizahantany Analamanga (Ortana) manatontosa ny hetsika “Ultra Trek des collines sacrées”. Fifaninanana dia an-tongotra lavitra ezaka (randonnée), hitetezana ny tendrombohitra masina manan-tantara eto Analamanga, hatao ny 20, ny 21 ary ny 22 novambra ho avy izao. Mitotaly 182 km ity fifaninanana ity, ahitana dingana efatra. Nampahafantatra izany, omaly, ny tale jeneraly (DG), ny MTTM, Ratokoniaina Yves, sy ny tale mpanatanteraka (DE) ny Ortana, Razafinavalona Harimisa.Manan-daza iraisam-pirenenaTanjona ny hanomezana tolotra vaovao ny mpanjifa, hampahantarana bebe kokoa an’i Madagasikara sy ny ao anatiny, toy izao hatao eto Analamanga izao. Taorian’ny fanadihadiana mantsy, tsikaritra fa misy ireo tendrombohitra masina sady manan-tantara sy malaza ka tokony homen-danja. Tsy eto an-toerana ihany fa na eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena aza, toa ny Rovan’Ambohimanga, vakoka iraisam-pirenena Unesco.Tsiahivina fa efa nahavita namaritra sori-dalana azo tsidihina mahatratra 700 km ny Ortana, tato anatin’ny 10 taona farany. Sori-dalana mitety kaominina maro ato anatin’ny faritra Analamanga. Efa nametrahana marika manokana amantarana an’Analamanga amin’ireo sori-dalana ireo, manaraka ny fenitra eoropeanina sy ny federasiona frantsay ho an’ny dia an-tongotra lavitra ezaka, hanamora ny fanarahan’ny mpifaninana azy.Njaka A.L’article Fizahantany anatiny: dia an-tongotra 182 km a été récupéré chez Newsmada.